SomaliTalk.com » USA
Home » Qoraallada Halkudhegga "USA"
Students Civil Rights Violated by University Police
Dahir, a black Somalian Muslim, remained in the room while the woman reportedly made hateful racist remarks and then called the police again. In the second call the woman claimed that Dahir had… Read More →
Halkudheg: police, USA, wiil
Haya’dda Maxaliga ee Relief for Africa (RFA) waxay ka qaybgelisaa Tartanka Shirkadda Pepsi ka wado dalka Mareynka Gudahiisa
VOTE NOW ! Halkan codkaaga ka dhiibo: http://www.refresheverything.com/empoweryouth Waxay Shirkadda Pepsi bilowday bishii Febraayo 2010 tartan loogu magic daray U Codeynta Afkaarta Cusub ee wax looga qabanayo arrimaha Bulshada iyo Deegaannada, wuxuuna yahay mid bile ah ee u furan dadweynaha, ganacsatada, iyo Haya’ddaha Daryeelka ee aan ahayn faaiidodoon ee ku sugan Dalka Mareykanka. Waxaan tartanka...
Xafladda Furitaanka Mac-Hadka Quraanka ee MAS Boston
Waxaa xalay oo Sabti aheyd bishu Jan 9, 2010 ka dhacay Masjidka weyn ee Jaamaca oo loo yaqaan (Islamic Society of Boston Cultural Center) Xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay oo loogu dabaal degayey furitaanka Mac-Had lagu baran doono diinta Islaamka. Xafladan waxaa soo qaban qaabiyey Bulshadda Soomaaliyeed ee magaaladda Boston. Furitaankii xafladda waxaa furay Maamulaha Mac-Hadka Quraanka Shiikh...
Halkudheg: Boston, USA